Kani waa CarPlay cusub ee loogu talagalay iOS 13 | Wararka IPhone
Kani waa macruufka cusub ee 13 CarPlay
Imaatinka macruufka 13 wuxuu ka dhigan yahay dayactirkii ugu weynaa ee ugu horreeyay ee CarPlay tan iyo markii ay Apple bilawday. Bilicsanaanta, ikhtiyaariyada qaabeynta cusub, hagaajinta arjiga Khariidadaha, Siri, wararka ku saabsan Codsiga Muusikada iyo Podcasts… Waxaa jira isbeddelo badan oo lagu soo daray CarPlay oo aan dooneyno inaan ku tusno fiidiyowgaan.
Iyada oo dhammaan isbeddelada ay CarPlay ku darayaan cusbooneysiintan soo socota, barnaamijka moobiilka ee Apple oo si gaar ah loogu talagalay in loogu isticmaalo gaariga wuxuu maareeyaa inuu sii ballaariyo farqiga u dhexeeya tartanka, calaamadeynta dariiqa ay Android Auto hubaal raaci doonto mustaqbalka dhow. Ma rabtaa inaad ogaato isbeddelada? Hagaag, fiidiyowgaan waxaad ku arki kartaa dhammaantood.
1 Khariidadaha hagaajinta
2 Muusikada iyo Podcasts
3 Horumar kale
Shaashadda kala qaybsan ayaa ah mid ka mid ah isbeddelada muuqda sida ugu dhakhsaha badan ee aad ugu xirto iPhone-kaaga gaariga. Shaashad aan ku arki karno Khariidadaha Apple, oo leh tilmaamaha la raacayo dhinaca midig, oo kaliya ka hooseeya muusigga yar ama muusikada, iyo ballanta xigta ee jadwalka hoose. In sidan uma baahnid inaad ka tagto khariidadaha si aad u beddesho dib u soo celinta hadda. Laakiin tani waa wax sharraxaad leh oo aysan habboonayn in la wanaajiyo hoosta.
Sida ugu dhakhsaha badan ee aad ugu xirto iPhone-kaaga gaariga Soo jeedinta u jeedku waxay soo muuqan doontaa iyadoo lagu saleynayo ballamaha jadwalkaaga. Dabcan, waa inaad kudarsataa ballanta goobta, caado aan qaatay waqti kahor oo hadda macno ka badan sidii hore. Intaa waxaa dheer, Khariidadaha waxay ku siinayaan talooyin taxane ah (guri, shaqo, goobihii ugu dambeeyay ee la booqday ...) taas oo aad uga dhigaysa mid aad u fudud in la calaamadiyo halka aad ku socoto.
Intaas waxaa sii dheer, raadinta waxaa lagu fulin karaa iyadoo la adeegsanayo codkaaga, oo la weydiisanayo meel ama qayb gaar ah, ka dibna lagu siinayo natiijooyin taxane ah oo aad ku arki karto inta aad ku jirto, oo ay ku jiraan dhibcaha TripAdvisor. Codsiga Khariidadaha Apple ee ku yaal CarPlay wuxuu noqonayaa beddel aad u fiican oo Khariidadaha Google ama Waze ah, iyaga oo ka hagaajinaya dhinacyo badan, in kasta oo ay wali jiraan cillado waaweyn oo aan lahayn digniinta raadaarka ama xaddidaadda xawaaraha.
Muusikada iyo Podcasts
Laakiin isbeddelada oo dhami kuma sii jiraan Khariidadaha, laba codsi oo aasaasi ah oo ku yaal CarPlay ayaa sidoo kale la kulma isbeddello bilic leh: Muusikada iyo Podcasts. Labada codsiba hadda waa kuwo muuqaal badan leh, oo leh album iyo daboolid shax ah taas oo kobcineysa aragtida menusyada kala duwan.
Waxay sidoo kale bedeshaa muuqaalka ciyaaryahanka, oo hadda ina tusaya thumbnail oo ka mid ah Podcast-ka, liiska ama albumka aan dhageysaneyno. Dabcan, badhannada waxtarka leh ayaa loo hayaa si ay u horumariyaan 30 ilbiriqsi (oo markaa uga boodaan xayeysiinta boodhadhka) ama si aad awood ugu yeelatid inaad heesaha ugu calaamadeysatid kuwa ugu cadcad ama aadan jeclayn. Raadinta talooyinka Apple Music ama barnaamijka Podcasts hadda waa muuqaal aad u badan, inaad awood u leedahay inaad si fudud u garato liisaska ama boodhadhka aad jeceshahay.
Isbedeladaan waxaa sii dheer kuwo kale oo badan, oo ah codsi cusub oo Settings ah si aad u awood u yeelatid "Haku qasin intaad wadid" qaabka ama aad si toos ah ugu dhaqaajiso habka mugdiga / iftiinka. Hadda Siri sidoo kale waa waxbaris yar, waadna sii wadi kartaa inaad aragto khariidadda hagista xitaa haddii aad u yeerto Siri, taas oo hadda (moodooyinka baabuurta qaarkood) laguugu yeeri karo "Hey Siri" adigoon riixin wax badhan ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 13 » Kani waa macruufka cusub ee 13 CarPlay
Khariidadaha Apple "Eeg Hareeraha" ee iOS 13: dareemo, fudeyd iyo midnimo
Kaamirooyinka gacanta labaad ee Nest ayaa wali heli kara milkiilayaashii hore